Supervisor (Account - FE) | A bank
Supervisor (Account - FE)
၁။ နိုင်ငံခြားသုံးငွေကြေးများ၊ မြန်မာကျပ်ငွေများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ် စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
၂။ ငွေကြေးလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
၃။ ငွေကြေးဌာန၏ နေ့စဉ်စာရင်းပိတ်လုပ်ငန်းစဉ်အား သိရှိ နားလည် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၄။ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှုရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ (Finance, Maths:, Account, Computer ဖြင့် ဘွဲ့ရသူ များအား ဦးစားပေးမည်။
၂။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်ရှိရမည်။
၃။ အသက် (၃၅) နှစ်အောက် ဖြစ်ရမည်။
၄။ Microsoft Word, Advance Excel, PowerPoint, Internet & Email အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရ မည်။
၅။ အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာအရေး ၊ အပြော တတ်ကျွမ်းသူအား ဦးစားပေးမည်။
Are you really interesting for this position?
Warehouse Supervisor (For Mandalay) Fortune International Limited Customer Service Supervisor MyWorld Careers Co., Ltd. IT Supervisor Yangon Academy International School Marketing Supervisor PEB Steel Myanmar Sales Supervisor Wall Street English Myanmar Store Supervisor Tyre World Co., Ltd. Housekeeping Supervisor (Public Area Only) - Urgent Property PLus Company Limited QA-QC Leader / Supervisor IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD. Admin Supervisor Global Yangon School Office Supervisor GETC & NURTURE English Training Center Marketing Supervisor City Global Mark Services Co., Ltd Product Application Supervisor Wilmar International Limited